[OROMO] Talaalliidhaan, Qoratamuudhaa, Walitti Qabama eeggannaa qabuun maatii keessan irraa ittisaa (Protect Your Family With Vaccines, Testing and Safe Gathering) | News & Blog | KFAI - Minneapolis + St. Paul
Christian Parker - Darked Eyed Gal	Jackson Buck
Heindorf, Accompanied by Dr. Samuel J. Hoffman, Theremin - The Dream	Jackson Buck
The Sons Of Talion - From The Abyss...	Jackson Buck
[OROMO] Talaalliidhaan, Qoratamuudhaa, Walitti Qabama eeggannaa qabuun maatii keessan irraa ittisaa (Protect Your Family With Vaccines, Testing and Safe Gathering)
covid-19Qorannoo COVID-19Talaallii Daa’immaniifTalaalliiwwanTumsituu
Ji’a Muddee keessa, dhimmi COVID-19 waggaa darbee kaasee sadarkaa isa guddaa qaqqabee jira.Tatamsa’ina koroonaavaayiresii haaraa kana tasgabbeessuuf, dhaabbileen fayyaa uummataa kanneen akka Muummeen Fayyaa Menesootaafi Giddugaleessi To’annoo Dhukkubaa ganna kana guutuu maatiin keessan fayyaatti akka eegaman gargaaruuf qajeelfafama isiniif kennaa jira.
Daa’imman umuriin isaanii 5-11 talaallii Pfizer COVID-19’f amma ga’oodha. Daa’imman guutummaatti talaallaman yoo koroonaa vaayiresii isa haaraadhaaf saaxilaman carraan isaan mana yaalaa ciisuuf qaban xiqqoodha. Akka Muummee Fayyaa Minnesotatti, daa’imman guutummaatti talaallaman yoo nama COVID-19 qabutti saaxilaman mana turuu(adda baafamuu) hin qaban. Talaalliin Pfizer daa’imman umuriin isaanii 5-11 dooziin isaa talaallii Pfizer kan namoota umuriin isaanii 12 fi isaa ol ta’erra ni xiqqaata. Daa’imman keessan talaallii kana doozii lama isaan barbaachisa. Doozii isa lammaffaa kan fudhachuu qaban doozii isa duraa erga fudhatanii torban sadii booddee ta’uu qaba. Ittisa filatamaadhaaf doozii lachuu fudhachuun barbaachisaadha.
Asirraa waa’ee talaallii daa’immanii caalmaatti baradhaa: https://mn.gov/covid19/vaccine/vaxforkids/
Mudde 6 jalqabaa kaasee Minnesotatti, kiliinikoota talaallii daa’imman waggaa 6-11kan Isteetii guutuu keessatti hojjetaniifi istatii tokko qofa keessatti hojjetaniif, kanneen mana barumsaa keessatti hojjetan dabalatee, talaallii tumsituu ni kenna. Salphaadhumatti Isteetotnti 35 kanneen kiliinikoota talaallii mana barumsaarratti hundaa’e kan daa’imman umiurii 5-11tti qabaniif maatii daa’immanii kanneen doozii isaanii jalqabaa ykn lammaffaa Mudde keessa ykn torbanoota jalqabaa amajjii keessa fudhataniif talaallii tumsituu kennuu ni eegala. Dabalataan kiliinikooti talaallii 5-11 ta’an aakuma karoorichi itti fufeen tumsituu argachuu eegalu. Namni kamiyyuu umuriin isaa 18fi isaa ol kan ta’e akkasumas kan guutummaatti talaallii argate talaallii tumsituu argachuudhaaf ga’aadha. Akka CDCtti, yoo talaallii Pfizer kan Moderna walitti fuftanii fudhattan, talaallii dhumaarraa kaasee ji’a 6 booddee talaallii tumsituu kamiinuu fudhachuudhaaf ga’oodha. Yoo jalqabuma talaallii Johnson & Johnson abbaa doozii tokkoo fudhattanii jiraattan, tallaallii doozii dhumaa irraa ka’ee ji’a lama booda talaallii tumsituu kamiifuu ga’oodha.
Tumsituu talaallii COVID-19 as irratti ni argattu vaccines.gov ykn Isteetii Minnesotatti vaccine locator map.
Walitti Qabama Yeroo Gannaa Fayya-qabeessaafi Qoratamuu
Yeroo Ayyaana Dhaloota Yesuus duukaa, Kwanzafi Waggaa Haaraan dhihaataa jira, Muummeen Fayyaa Minnesota maatii ganna kana guutuu mana keessatti walitti qabamaniif qajeelfama kenna:
– Yoo ga’aa taatan talaalamaa, tumsituu dabalatee garee gorfamaniif kan kennamu
– Deemuu keessan dura xiqqoo dhabbasaa. Torban lama dura yoomessa namootti
itti baayyatan dhiisaa.
– Walitti qabamuu keessan guyyaa muraasa dura qoratamaa, bakka qorannoon itti adeemsifamutti ykn karaa sagantaa qorannoo manattii. Bu’aan qorannoo kan saffisaa sa’a 1-3, akkasumas karaa qorannoo gororaa PCR sa’a 24-72 keessatti ga’a.
– Yoo mallattoo qabaattan ykn bu’aan qorannoo keessanii akka COVID-19 qabdan
mirkaneesse mana turaa. .
– Ittisaaf karaa ittiin ofirraa dhowwitan garaagaraa fayyadamaa. Ittisa dachaa kaawwadhaa, bakka dandaa’ametti fageenya hawaasaa keessan eeggadhaa, keessumatti namoota mana addaaddaa keessaa walitti dhufan waliin kan walgeessan yoo ta’e, namoota umurii garaagaraa yoo taatan, namoota talaallii hin fudhanne yoo ta’e, ykn namoota balaa hamaaf saaxilamuu danda’an yoo ta’e.
Caalmaatti asirraa baradhaa: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/holidays/celebrations.html
KFAI keessa kan jirru hundumti keenya,dursinee Waggaa Haaraan kun kan gammachuu, kan fayyaa akka isiniif ta’u isiin hawwina!